Lego Star Wars 75311 Imperial Armored Marauder အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
26 / 06 / 2021 09 / 08 / 2021 ရော့ Paton 1732 Views စာ0မှတ်ချက် 75078 Imperial တပ်များပို့ဆောင်ရေး, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, Artမကောင်းသော Stormtrooper, dune မျက်နှာ, Greef Karga, Imperial တပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Lego, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, သေးသေးလေး, ဒဏ္.ာရီ, reviews, Star Wars, Star Warsဖြေ, မုန်တိုင်း, အဆိုပါ Mandalorian, Trexler 906 သံချပ်ကာ Marauder
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ဘယ်လိုဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Star Wars စစ်တိုက်ခြင်းမရှိဘဲမှာအားလုံးမကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဘယ်သူ့ကိုမှပြောချင်ပါသလား? ကောင်းပြီ, ငါတို့လိမ့်မည်။ အကယ် Lego အခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဘယ်တော့မှပြန်မထုတ်ရန် Group မှဆုံးဖြတ်သည်။ ငါတို့နှင့်အဆင်ပြေမည်။ ဖြေလျှော့ - ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရှိတယ် ပြီးသားအတည်ပြုခဲ့သည် အသေးစားလေးရောင်ခြမ်းပုံစံတပ်မတော်တည်ဆောက်သူများသည်မကြာမီပြန်လာကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကြာရှည်စွာသူတို့သည်စင်များနှင့်အစုများကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်သွားတယ်၊
တူတာ 75280 501st Legion Clone Troopers များ ၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၁ အထိ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder နှစ်လယ်ပိုင်းအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ် Lego Star Wars မျှတတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အသေးစားဓာတ်ပုံတွေနဲ့အမှန်တကယ်ထိုက်တန်တဲ့တည်ဆောက်မှုတစ်ခုပါ Lego Star Wars စုဆောင်းမှု။ ဤအစုများသည်စစ်ထုတ်ရန်ထက်စုဆောင်းရန်အနည်းငယ်ပိုကြာနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်သည် ပို၍ ကောင်းမွန်သည် Star Wars အတွေ့အကြုံများကို။
နှင့်၏တိကျသောအမှု၌တည်၏ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauderငါတို့မနှစ်က 501 set ထက်ပိုကောင်းတဲ့ 'false battle pack' ရဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရလိမ့်မယ်။
theme: Lego Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 34.99 / $ 39.99 / € 39.99 အပိုင်းပိုင်း: 478 အသေးစားပုံများ: 4
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder Greef Karga, Cara Dune နှင့်အမည်မသိ Mythrol (အပြာရောင်ကောင်လေး) တို့က Scout Troopers တစ်စုကလိုက်လံရှာဖွေနေသော Trexler 906 သံချပ်ကာ Marauder ကိုအခြေခံသည်။ Nevarro တွင် ၎င်းသည်၎င်းတို့လွတ်မြောက်ရန်အတွက်တပ်မှူးသုံး ဦး နှင့်၎င်းအားပေးအပ်ထားသောဘတ်ဂျက်အရဖြစ်သည် Lego သတ်မှတ်ထားသည်၊ ၎င်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရှုပ်ထွေးသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။
ဤတွင် Lego Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်လှည့်ဖျားခြင်းနှင့်အလှည့်အပြောင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောမော်ဒယ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကစားစရာများနှင့်အလွန်စုဆောင်းနိုင်မှုကိုဖန်တီးရန်ဝှက်ထားသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ထုပ်ထားသည်။ Lego အစုံ
ထို့အပြင်ဤနေရာတွင်ပျော်မွေ့ရန်နှင့်တန်ဖိုးထားရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်မော်ဒယ်လ်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးပြီးဖမ်းယူသည့်အရာများသာမက၊ မလိုအပ်သောအပိုဆောင်းနှင့်နီးကပ်သောအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤသည်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များအရဇိမ်ခံတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး - ဤအစု၏ကိစ္စတွင် - p ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်arts ။ ရှေ့ခန်းbehindရိယာ၏နောက်ကွယ်ရှိအတွင်းပိုင်းအပိုင်းအတွက် ၁ × ၁ အုတ်ကိုဒီဇိုင်နာများအသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာတွင်သူတို့သည်အစားထိုးလျှောစောက်ကို အသုံးပြု၍ ယာဉ်အတွင်းပိုင်းစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးမည်သူကိုမောင်းနှင်နေမည်ဆိုပါကပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ထိုင်တော်မူ၏။
ထိုနည်းတူစွာအဖွင့်ဘေးပေါက်၏အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုသင်ရွေ့လျားတိုင်းနေရာချထားရန်အတိအကျနေရာချထားရန်မလိုအပ်ဘဲအပြည့်အ ၀ ဖြောင့်မတ်စွာထိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ အသုံးပြုစရာမလိုသည့်2×2ပြားနှင့်ကျွမ်းကျင်သောနားလည်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Lego 1 × 1 inverted brackets နှစ်ခုကို frame ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့အပိုင်းအစများသည်တံခါး၏အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်တွင် 1 ×2inverted brackets နှစ်ခုကိုဖမ်းယူနိုင်ဖို့ကြားခံအဖြစ်လုပ်ဆောင်တယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်က၎င်းသည်2×4panel မှတည်ဆောက်ထားသော flip-up တံခါးတစ်ခုမျှသာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ပြောင်းရွှေ့တိုင်းသင်ကသင်လိုချင်သည့်နေရာကိုပြန်လည်နေရာချထားရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကတံခါးတစ်ဝက်လောက်ပဲအာရုံစိုက်ဖို့အတွက်စကားလုံးတွေအများကြီးပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘယ်လောက်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာဥပမာကောင်းတစ်ခုပါ Lego တည်ဆောက် 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder အမှန်တကယ်မည်မျှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်၊ အားလုံးမီးခိုးရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်အားလုံးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်xtra ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်ရှိသော်လည်းပုံစံအရွယ်အစားနှင့်စျေးနှုန်းကိုမူကြည့်လျှင်မျှော်လင့်မထားလောက်အောင်များပြားသည်။
ဆိုလိုတာကအားလုံးအတူတကွစုစည်းလိုက်တာနဲ့ဒီဟာကတံခါးပေါက်များ၊ အဖွင့်အပေါက်များနှင့်အပေါက်များပါ ၀ င်ပြီးအကျေနပ်စရာအရှိဆုံး - ဆုံလည်သေနတ်များနှင့်နောက်ဘက်၌တည်ဆောက်ထားသည့်ကြီးမားသောထည်ထည်များပါဝင်သည်။ အတွင်းပိုင်းသေနတ်သမားကိုအပြင်ပန်းလုံး - သေနတ်သမားများနှင့်အလွယ်တကူမကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်ဆက်သွယ်ပေးသောမော်ဒယ်၏။
မျက်စိကိုဖမ်းရန်များစွာရှိသည် 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauderနှင့်အတူ fiddle, ဤမျှလောက်ဖွင့်လှစ်, အတွင်းသိမ်းဆည်းထားနှင့် All- ပတ်ပတ်လည်အပြန်အလှန်။ သင်က၎င်းကိုပြသမှုအတွက်ဝယ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုဖြိုဖျက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ Stormtrooper စစ်တပ်အတွက် ၄ င်းကိုများပြားစွာဝယ်ယူနိုင်ပြီး၊ ပုံစံတစ်ခုချင်းစီကိုတည်ဆောက်လိုဆဲဖြစ်သည်။
မကျေနပ်ချက်များရှိပါသလား။ အပေးအယူတစ်ခုမှာ Stormtroopers သည်အတွင်း၌ရှိနေစဉ်ရပ်။ မရနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မျှတသောထိုင်ခုံနေရာများကြောင့်ဖြစ်သည် - သင်အမှန်တကယ်ထိုတွင်ရှိ Stormtroopers ငါးလုံးအတွက်နေရာရှာနိုင်သည်။
နှစ်ခု minifigure ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရှိပါတယ် 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, သူတို့ Greef Karga နှင့်ဖြစ်ကြသည် Artillery Stormtrooper ။ Greef မှ စတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယအကြိမ်ဒီဇိုင်းပုံစံသစ်ကိုမန်ဒီမိုရီယန်နိုင်ငံ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အသစ်ဖြင့်ပုံဖော်ထားပြီးရာသီဥတုဆိုးရွားမှုနှင့်အတူမီးခိုးရောင်မုတ်ဆိတ်မွေး၊ သူ၏ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အသေးစိတ်ရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာသူ၏မျက်နှာပုံနှိပ်ခြင်းတွင်သူ၏ပဲ့တင်ထပ်မှုကိုအတော်လေးကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုအတောအတွင်း Artillery Stormtrooper သည်တစ်လမ်းတည်းဖြစ်သည် Lego Star Wars Stormtrooper ၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလက်ခံလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နေဆဲကြိုက်တတ်တဲ့ 2014 မှ 2018 အထိပွေးသောသံခမောက်၏ဗားရှင်း, သို့သော်နောက်ဆုံးပေါ်, dual- ပုံသွင်းဒီဇိုင်း၏ရောင်စုံမျိုးကွဲဖြန့်ချိ၎င်း၏မဟုတ်ရင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်အချိုးအစားမှကျွန်တော်တို့ကိုနွေးပေးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောအပြင်ဖြစ်သည် Lego ကျွန်တော်တို့အများစုသည်အင်ပါယာစစ်တပ်သည်စုဆောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအချို့သောအရောင်များနှင့်ရာထူးများအတွက်ကွဲပြားသောအခန်းကဏ္ with မှပါ ၀ င်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏သံခမောက်များကိုမနှစ်သက်သည့်အပြင် Stormtroopers (မျိုးကွဲတစ်ခု) (၃) ခုထပ်မံထည့်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်းအားဝေဖန်ရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, partသူတို့ကသေနတ်သမားများဖြစ်ကြောင်းစစ်တိုက် pack ကိုဒုက္ခထက်ပုံသွင်း blasters နှင့်အတူကြွလာအဖြစ် icularly ။
Marauder ကိုမောင်းနှင်ရန် Imperial လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး ပါ ၀ င်ခဲ့ဖူးသောမည်သည့်အရာထက်မဆိုဤသေးငယ်သောရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ပျော်ရွှင်စေသည်။ ပတ်ပတ်လည်၌ထိုင်သောသူတို့အားများစွာသောရှိပါတယ် Lego Star Wars Stormtroopers ၏ Legion များနှင့်အတူတူပင်သင်တို့၏စစ်တပ်နှင့်အတူဂြိုလ်များကိုကျူးကျော်။ မရနိုင်ပါ။
သို့သော်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတစ်ခုရှိသေးသည် - ဤတပ်ဆင်မှုမှမော်တော်ယာဉ်သည်ဂရင်းဖ်ကာဂါ၊ ကာရာဒွန်းနှင့်အမည်မဖော်သော Mythrol (နောက်တဖန်အပြာရောင်ကောင်လေး) ကို Scout Troopers အဖွဲ့မှလိုက်လံမောင်းနှင်နေသော Mandalorian ၏ဒုတိယရာသီတွင်အဆက်မပြတ်ပေါ်နေသည်။ Nevarro အပေါ် speeder စက်ဘီး။ ဤအတောအတွင်း Artillery Stormtrooper နှင့်အခြား Stormtroopers တို့သည်မှတ်သားလောက်ဖွယ်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုတွင်၎င်းတို့သည် Tython ရှိ Mandalorian, Fennec Shand နှင့် Boba Fett တို့ကိုဆန့်ကျင်။ ရင်ဆိုင်ရသောအခါမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည်။
ဒါကဘာအတွက်အသေးအဖွဲတိုင်ကြားစာပါ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ကျွန်ုပ်တို့ကိုပျော်ရွှင်သောအပေးအယူတစ်ခုအဖြစ်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Scout Trooper တစ်ခုပါဝင်သည် လွန်ခဲ့သော Mandalorian Lego Star Wars set, နှင့်အထင်ကြီးများအတွက်ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ဒီ p အပါအဝင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်articular Stormtrooper သုံး။
သို့တိုင်, အဘယ်သူမျှမ speeder စက်ဘီး။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့စောင့်နေရ ဦး မည်၊ မင်ဒဲလားအခြေပြုတိုက်ပွဲများသည်မျဉ်းကြောင်းနောက်တွင်ရှိမနေကိုကြည့်ရလိမ့်မည်၊ ဤအချိန်အတောအတွင်းအမြဲတမ်းရှိနေသည်။ Brick Fanatics'' အလွန်ကိုယ်ပိုင် Mandalorian-themed speeder ဆိုင်ကယ်ဒီဇိုင်း p ရဖို့arts ကိုစာရင်း.
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder အကောင်းဆုံးသူချင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည် Lego Star Wars နွေရာသီ 2021 လွှတ်ပေးရန် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starshipကတန်ဖိုးနှင့်တန်ဖိုးများ၏အမြင်မှကြွလာသောအခါ။ အပိုင်းအစ ၄၇၈ ကိုသင်တည်ဆောက်သောမော်ဒယ်သည်မျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များထက်သေးငယ်ပုံရသည်။
သို့သော်၏အမှု၌ရှိသကဲ့သို့ 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ဒီဇိုင်း၊ ကစားခြင်း၊ ပြသခြင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းတို့တွင်အလင်းကိုခံစားသောပုံစံမဟုတ်ပါ။ အုတ်တစ်လုံးတည်းကိုအလဟ has မဖြုန်းတီးနိုင်သေးပါ။ အုတ်အရေအတွက်နှင့်အသေးစားရုပ်ပုံလေးခုကိုပေါင် ၃၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ / ယူရို ၃၉.၉၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းထက်မကသည်။
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder အလယ်အလတ်အရွယ်ရှိမီးခိုးရောင်သေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည် Lego။ ၎င်းသည်တည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအရာလည်းမဟုတ်ပါ။ နောက်ပြီးကစားခြင်းကဲ့သို့ပျော်စရာလည်းမဖြစ်သင့်ပါ။ သို့သော်မည်မျှကြီးမြတ်ကြောင်း ၀ န်ခံခြင်းအတွက်ရှက်စရာမဟုတ်ပါ၊ အများစုမှာ Stormtroopers အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။
၎င်း၏စျေးနှုန်းအချို့ကိုအစပိုင်းတွင်တွန့်ဆုတ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့် parts-to-price အချိုးဟာမျှတတဲ့တန်ဖိုးထက်ပိုပြီးကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟူသည့်ခံစားချက်မဟုတ်ပါ Lego အပိုင်းအစဒီအစု၏ဒီဇိုင်းကိုဖြုန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေမယ့်အတွင်းပိုင်းကျယ်ဝန်းသည်, ရှုပ်ထွေးပေမယ့်လိမ္မာပါးနပ်ပါဝင်သည်ဤမျှလောက်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ။
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ထို့အပြင်၏အလုပ်ကိုဆက်လက်ဆက်လက်ကူညီပေးသည်မသာ 75280 501st Legion Clone Troopers များ နောက်ကျကျန်သောစစ်မြေကွက်များကျန်ရှိနေသောကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်စစ်အထုပ်များပြန်မလာပါကကမ္ဘာ၏နိဂုံးမဟုတ်သည့်အတွက်သိသာသောနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုလည်းပေးသည်။
အဆိုပါ Trexler 906 သံချပ်ကာ Marauder 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အခြေခံသည် - ထိုအတွက်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ် Star Wars galaxy - K79-S80 Imperial Troop Transport (ITT) ၏သံချပ်ကာပုံစံ။ ITT (သူ့ဟာသူ) တစ် ဦး Kenner ကစားစရာအားဖြင့်မှုတ်သွင်း 1979 မှသည်) 2015 စစ်ဆင်ရေးအထုပ် 75078 Imperial တပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ထင်ရှား။ ,
၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းသောနည်းနည်းတည်ဆောက်မှုအတွက် (နှင့်အခြားစစ်တိုက်အထုပ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု) အတွက်ပြုလုပ်သော်လည်း၎င်းသည်စစ်လက်နက်အထုပ်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအကြားကွာဟမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ Lego ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအတွင်းလာမည့်စျေးနှုန်းအချက်များတစ် ဦး မှာလာသည်ဟုအစုံ။
Battle packs တွင်သူတို့နေရာရှိသည်၊ ၀ ါသနာသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ကြောင်းအနာဂတ်၌ပိုမိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကိုင်ပြီးရကျိုးနပ်ကြသည်။ သူတို့ကနည်းနည်းပိုစျေးကြီးလာနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီအဆင့်ကိုအကောင်းဆုံးပေးတယ် Lego Star Wars ဒီဇိုင်းကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Star Wars 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder?
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ရှုပ်ထွေးပြီးအသေးစိတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်တည်ဆောက်ရန် ၄၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Star Wars 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder?
478 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauderသီးသန့် Greef Karga အတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်အပါအ ၀ င်အသေးစားလေးခုပါရှိသည် Artillery Stormtrooper နှစ်ယောက်ပုံမှန် Stormtroopers ။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder?
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder အလျား ၂၀ စင်တီမီတာ၊ အမြင့် ၈.၅ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၁၀.၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ ဒါဟာကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေမယ့် Imperial တပ်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုဗားရှင်းတကယ်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးအသေးစားငါးခုများအတွက်ထိုင်ခုံအာကာသရှိပါတယ် ...
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Star Wars 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ကုန်ကျ?
75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder ယူကေတွင်ပေါင် ၃၄.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ နှင့်အီးယူရှိယူရို ၃၉.၉၉ မှဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရိုးရာတိုက်ပွဲများအပေါ်သိသိသာသာမြင့်တက်ခြင်းကိုလည်းကောင်းကိုယ်စားပြုသည်။